Maxay qabtaan Suuqleyda Dijital ah?
Muxuu Sameeyaa Suuqley Digital ah?
Khamiis, Maarso 19, 2015 Saturday, May 7, 2016 Douglas Karr
Aynu furno adoo sheegaya inaan haysto shaqadan ninkan hoosta, heh. Sida suuq-galiye dijitaal ah, waxaan ku wareejineynaa dhammaan macaamiisheenna toddobaadle ah, annagoo falanqeyneyna waxqabadkooda, sameyneyno hagaajinno, cilmi baaris, qorsheyn iyo fulinta ololeyaal badan oo kanaal ah. Waxaan ka faa'iideysaneynaa qalab aad uga badan tan faahfaahinta macluumaadka - laga bilaabo isgaarsiinta, daabacaadda, qalabka horumarinta iyo falanqaynta.
IMO, suuqleyda badankood waxay ka shaqeeyaan aaggooda ay aad ugu kalsoon yihiin. Maaha wax kadis ah in kanaalkaasi uu sida ugu fiican ugu qabto iyaga maxaa yeelay waa midka ay aqoontooda u leedahay. Haysashada xirfadaha falanqaynta adag ayaa laga yaabaa inay tahay hantida ugu hooseysa ee suuqleyda dhijitaalka ah maanta maxaa yeelay waxay ka caawineysaa inay arkaan meel ka baxsan aaggooda raaxada oo ay arkaan fursadaha ama nusqaamaha jira ee lagu heli karo habab kale. Kaliya maahan sida ay hal kanaal u shaqeyneyso, ee waa sida wanaagsan ee dhammaan kanaallada ay u shaqeyn karaan haddii si habboon loo waco.
Aad uga fog awoodda fudud ee isticmaalka warbaahinta bulshada, suuqgeynta dhijitaalka ah waxay u baahan tahay fahamka caadooyinka macaamiisha iyo dhiirrigelinta, awoodda wax soo saaridda Analytics, iyo si wax ku ool ah ula xiriirida macaamiisha. Hubi waxa saxda ah suuqgeynta dhijitaalka ah, sababta ay muhiim u tahay, nolol maalmeedka suuqyada dhijitaalka ah iyo sida loo galo warshadaha.
Suuqgeeyayaasha dijital ah ayaa mas'uul ka ah, dhamaadka maalinta, dhismaha wacyigelinta, bixinta cilmi baarista rajooyinka, iyo u horseedida rajooyinka uqalma u beddelashada. Shaqadaas ayaa maanta aad uga adag sidii ay ahayd xitaa sanad ka hor. Nidaamyada waxay u kobcayaan xarumaha suuq geynta isku dhafan, xog weyn iyo xogta qulqulka waxay bixinayaan fursado-waqtiga dhabta ah ee wax ka beddelka suuqgeynta, iyo dhagaystayaal kala duwan oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee kanaallada iyo aaladaha ayaa ku daraya kakanaansho aan dhammaad lahayn si ay u helaan farriinta saxda ah ee qofka saxda ah waqtiga saxda ah.
Taasi waxay tidhi, qaar badan oo ka mid ah suuqleyda dhijitaalka ah ayaa sidoo kale si fudud ugu takhasusay hal meel, halka kuwa kale ay jecel yihiin hay'addeena waxaad diirada saartaa garaacida dheelitirka saxda ah ee xeeladaha. Ka dib waxaan u keennaa khubaro miiska si ay uga caawiyaan isdhexgalka, otomaatiga, isgaarsiinta iyo fulinta xeeladahaas ama waxaan la shaqeyneynaa kooxda suuqgeynta ee horay ugu sugnaa shirkadda.
Tags: maalin noloshamaalin nolosha suuqyada dijitaalka ahsuuq-geynta dijitaalka ahinfographicsuuqgeeyemuxuu sameeyaa suuqleyda dhijitaalka ahi
10 Faa’iidooyinka Ganacsi Kasta oo Yar Lagu Ogaado Istaraatiijiyad Suuq Digital ah
Shuruudaha Raadinta ugu Qaalisan ee Bixinta - iyo Sida Looga Fogaado